Ukuchithwa kwe-chip ye-LPC yi-succ ...
EPM570 IC ukuvula
Maleko 8 PCB Clone
Maleko 12 ikopi Medical PCB
Maleko 12 ikopi PCB
Xa sijongana neemveliso zetekhnoloji ephezulu, kufuneka siqhubeke nokufunda kunye nomoya "wokuzisa imigaqo". Kuya kufuneka sifunde kubuchwephesha obuphambili kwaye senze izinto ezintsha ngokuzimisela, siphinde sisebenzise isiseko sabo bangaphambili.
Ngelixa uhambelana nentengiso kwaye ujolise kuphuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, isebe le-R & D le-Shenzhen Sichi lihlala lihambelana nenkolelo yokwenza ilizwe elinamandla ngenzululwazi kunye netekhnoloji, kwaye lihlala lisophula imiqobo yezobuchwephesha, ukuze kukhuthazwe inkqubela phambili yophando lwenzululwazi yelizwe lethu nokuvuselela ishishini lesizwe. Emva kweminyaka yophuhliso olunzima, iye yaba ngumthetheleli kunye nenkokeli ye-high-tech kushishino lwasekhaya, kwaye ihlala ikhuthaza ukuphuculwa kweTshayina ukusuka "kwenziwa e-China" ukuya "kwi-China's Intelligent Manufacturing".
Bambelela kumoya wokunyamezela, ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo ekuphuculeni umgangatho, uhlala ufunxa itekhnoloji yamanye amazwe, uphucule umgangatho wemveliso, ukhawulelana neemfuno zabathengi, kukhuphiswano olunobukrakra lweemarike luye lwamkelwa kakuhle ngabathengi, umthamo we-odolo uyanda unyaka nonyaka .
Iimveliso zombane zenze igalelo elikhulu kwishishini lokhathalelo lwempilo njengokuqonda, ukubek'esweni kunye nezixhobo zonyango. Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji ye-elektroniki, usetyenziso lwezonyango lwezi zixhobo ze-elektroniki luyakhula ngokuqhubekekayo, lusebenza ngakumbi kwaye lubanzi, olukhokelela kumathuba amatsha angenamda. Isiseko zezixhobo zonyango yi-PCB. I-PCB kwishishini lezonyango ikhethekileyo kakhulu ukuhlangabezana nezithintelo ezizodwa zezixhobo zonyango. I-PCB yezoNyango nayo inokwenziwa nge-substrate eguqukayo, evumela i-PCB ukuba igobe ngexesha lokusetyenziswa, nto leyo ebalulekileyo kuzo zombini izixhobo zonyango lwangaphakathi nangaphandle.
I-PCB ikwasetyenziswa kakhulu kwimveliso, kwimizi-mveliso nakwimizi-mveliso ekufutshane. La mashishini anezixhobo ezisebenza ngamandla oomatshini, eziqhutywa ziisekethe ezisebenza ngamandla amakhulu ezifuna amandla ngoku. Ukuza kuthi ga ngoku, ungqameko lobhedu lubhijelwe ngaphezulu kwe-PCB, ngokungafaniyo ne-PCB ye-elektroniki entsonkothileyo, ene-amperes eyi-100 yangoku. Oku kubaluleke kakhulu kwizicelo ezinje nge-arc welding, i-servo motor drive enkulu, iishaja zebhetri ekhokelayo-asidi, ishishini lezomkhosi kunye nokungaqondakali kwempahla yomqhaphu.
Ukuchithwa kwe-chip ye-LPC kuyaphumelela
I-Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasungulwa ngo-2000 Sisebenza kwi-PCB engama-1-32 ngokukhawuleza, ukugcinwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo zazo zonke izixhobo zonyango, izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano zeselula. Singomnye wamashishini anamandla kwaye anempembelelo kunye namashishini anjengeenkonzo zokumisa enye yeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ulungelelwaniso lwePCB, ukuqhekeka kwe-IC, uyilo lwePCB, ukuqaqanjelwa kwe-IC, uyilo lwe-chip reverse, ukwenziwa kwe-SMT, ukuveliswa kwePCB, imveliso yomzekelo kunye nokulungisa ingxaki.
Uhlaselo lwe-GD32F103 IC
Uqinisekiso lomgangatho weMveliso, ukusebenza ngokukuko, izinto eziphezulu, umgangatho ophezulu, ukubonelela ngokusebenza okuphezulu, ukuthengisa kwinkampani yetekhnoloji enye, inkonzo esemgangathweni yobungcali kuwe
I-PCB isetyenziswe ngokubanzi kwimveliso ye-elektroniki. Ngaphandle kwe-PCB, akuyi kubakho kuphuhliswa ngokukhawuleza kolwazi lwangoku lwe-elektroniki
Inkampani ihlala ihambelana nomsebenzi wokusebenza kweshishini "wobuchwephesha, okholisayo", kwaye yakha iqela lobuchwephesha lobuchwephesha ukubonelela abathengi ngeenkonzo zentengiso zangaphambi kokuthengisa nasemva kwentengiso,
Umgangatho ophezulu wenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, siye sanamathela kwingcinga "yenkonzo yokuqala", sinamathela kukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa kulo lonke eli shishini, ukusombulula yonke imiba yeengxaki zokubuyela umva kwi-R & D
Ukuchithwa kwe-PIC16F1937 chip
Siyakholelwa ukuba umgangatho ngumphefumlo weshishini, kwaye unikezela ngemveliso ye-elektroniki echitha ixesha, iinkonzo zobunjineli kunye neenkonzo zokuvelisa. Abathengi abathembekileyo basebenza nathi kaninzi-ninzi, kwaye xa abathengi abatsha besiva malunga negama elihle, beza eSichi ukumisela ubambiswano. Sijonge ukukunika inkonzo ekumgangatho ophezulu!
PIC24HJ64GP206 chip ukuqhekeka
Ukubonelela abathengi ngobuchwephesha, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo ngenkonzo yokuguqulela kwi-chip ukuguqulelwa kwethekhnoloji
I-Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasungulwa ngo-2000. Sisebenza kwi-PCB engama-1-32 ngokukhawuleza, ukugcinwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo zazo zonke izixhobo zonyango, izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano zeselula. Singomnye wamashishini anamandla kwaye anempembelelo kunye namashishini anjengeenkonzo zokumisa enye yeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ulungelelwaniso lwePCB, ukuqhekeka kwe-IC, uyilo lwePCB, ukuqaqanjelwa kwe-IC, uyilo lwe-chip reverse, ukwenziwa kwe-SMT, ukuveliswa kwePCB, imveliso yomzekelo kunye ne-debu ...
I-Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasungulwa ngo-2000 Sisebenza kwi-PCB engama-1-32 ngokukhawuleza, ukugcinwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo zazo zonke izixhobo zonyango, izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano zeselula. Singomnye wamashishini anamandla kwaye anempembelelo kunye namashishini anjengeenkonzo zokumisa enye yeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ulungelelwaniso lwePCB, ukuqhekeka kwe-IC, uyilo lwePCB, ukuqaqanjelwa kwe-IC, uyilo lwe-chip reverse, ukwenziwa kwe-SMT, ukuveliswa kwePCB, imveliso yomzekelo kunye nokulungisa ...